Booliska oo Ka Hadlay Khasaaraha Qaraxa Muqdisho - Radio Simba 95.0 MHZ - Simbanews - Idaacada Simba
Booliska oo Ka Hadlay Khasaaraha Qaraxa Muqdisho
Laamaha amaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay qaraxii saakay Ka dhacay Magaaladda Muqdisho.
Qoraalka kasoo baxay taliska Booliska Soomaliya ayaa loogu hadlay qaraxa Dhacay.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxa oo gaari loo adeegsaday uu ka dhacay saakay xaafadda Taleex ee Muqdisho.
Afhayeenka Booliska Soomaaliyeee ayaa qoraal uu soo dhigay ku sheegay in qaraxa lala damacsanaa gaadiid ka mid ah kuwa ilaaliya UN-ka oo goobta marayey 8-ruux ayuu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 17-kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaas.
“25-11-2021 abaaro 07:32hrs waxaa Qarax gaari ka dhacay inta u dhaxeysa isgoyska Tarabuunka iyo Guriga Ex.M. Cabdiqaasim gaar ahaan Afaafka Hore Ee Iskuulka Mocaas oo kuyaala kasoo horjeedka Dugsi sar Banaadir
Gaariga Qarxay Noociisu waa Surf kana yimid dhanka Tarbuunka taarget.ka wuxuu ahaa Baabuurta waardiyeysa UN.ka ee Looyaqaano Duguf Security Qasaaruhuna ay Turakoobeen Boliisku waa 8 Dhimasho ah iyo 17 Dhaawac ah”,ayuu yiri Afhayeenka.